Archive du 20171227
Hery Rajaonarimampianina Hatao veloma amin’ny 5 janoary
Hotanterahina ny zoma 5 janoary 2018 ny Asaramanitra na lanonana fifampiarahabana fanaon’ny andrimpanjakana eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara isaky ny fiandohan’ny taona. Manodidina ny 1200 any ny vahiny nasaina amin’io,
Lalam-pifidianana Eny Tsimbazaza amin’ny 9 janoary
Raha tsy misy ny fiovana dia hiatrika fivoriana tsy ara-potoana ireo solombavambahoaka sy loholon’i Madagasikara manomboka amin’ny talata 9 janoary 2018.
Fitondran-Rajaonarimampianina Lany andro maka tahaka
Mpaka tahaka ! Nanamarika ity fitondrana Rajaonarimampianina ity izany. Ny andro voalohan’ny fitondrany dia nahoraka sady nigagam-bahoaka ilay kabary natao nipoapoaka teo Mahamasina ny 25 janoary 2014,
Fifidianana 2018 Didier Ratsiraka no kandidan’ny AREMA
Miomana amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ny antoko politika samihafa misy eto Madagasikara.
Vondrona MAPAR Tsy manaiky ny hikitihana ny lalàmpanorenana
Fantatra fa niezaka nampiantso an’ireo lohandohan’ny mpisorona mitarika ny vondrona antoko politika MAPAR teny amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo ny faramparan’ny herinandro lasa teo ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Malagasy am-perinasa
Taratasin’i Jean Andeha vakansy ?
Mbola mahamay be anie ny eto an-tanàna ry Jean nefa ianareo toa handeha hiala sasatra sahady e ! Isika anie mbola mila manenjika be mihitsy fa na ireo noheverina ho ganantsika teo aloha aza ity toa efa maro ny nihoatra antsika a !
Seranantsambo Toamasina Vola iray kaontenera mihitsoka ao
Nampiseho ny firaisankinany ireo mpitatitra amin’ny kamiao sy ireo “Transitaires” omaly, nanombohan’ny fitokonana lavareny ataon’izy ireo,
PM tany Mampikony Fandaniam-bola mihoapampana
Nitsoriaka tany Mampikony, faritra Sofia ny delegasiona notarihin’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier ny alakamisy lasa iny. Niara-dia taminy tamin’izany ny Sekreteram-panjakana misahana ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana Rafatrolaza Bary Emmanuel.
Fetin’ny faran’ny taona Hitety vanim-potoana ny Akam’s Music
Ny taona 2006 no teraka ny tarika Akam’s Music, raha ny fanazavan’i Maholy, vavy tokana sady lehiben’ny tarika. Mpinamana maromaro no nanangana azy ary dia avy amin’ny teny hoe “Akama” sy ny fitiavana mozika no nahatonga ny hoe : “Akam’s music”.
Fikambanana Fifanampiana Malagasy “Tsy manampy anay ny fanjakana”
Toy ny fanaony isan-taona, isaky ny volana jona sy desambra dia nanatanteraka fizarana fanampiana ho an’ireo fianakaviana sahirana manerana ireo Boriborintany enina eto Antananarivo tetsy amin’ny foibeny etsy Ampandrana ny fikambanana Fifanampiana Malagasy mba hahafahan’ireo mpisitraka miatrika ny fetin’ny noely sy taom-baovao finaritra.
Kaominina Andoharanofotsy Matotra ny fiaraha-miasa 3P
Mahantra sy zokiolona niisa 50 tany ho any no afaka nihanoka ny fetin’ny Krismasy tamim-pitoniana tao amin’ny fokontany 5
Maroantsetra 6000 Ar ny litatry ny solika
Sarotra ny mahita solika ao Maroantsetra. Raha misy dia fotoana fohy monja, avy eo dia varomaizina no manjaka. Roa ny toby mpaninjara solika misy ao Maroantsetra,
Manakara Solitany nitobaka, nandoro trano 20 tafo
Trano 20 tafo no levon’ny afo tao Ambohitradala Manakara ny 24 desambra tokony tamin’ny11 ora alina, andro nankalazana ny fahaterahan’ny Mpamonjy indrindra.
Famaranana rugby - Top 9 Hangotraka indray etsy Mahamasina
Azo antoka fa noho ny fiaraha-miasan’ny Analamanga rugby amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra no ahafahan’ity farany hanatontosa ny lalao famaranana TOP 9 karakarainy etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina amin’ny sabotsy 30 desambra izao.
Kitra - Espaina Nahazo kiana mafy i Zinedine Zidane
Nahazo kiana mafy dia mafy tamin’ny gazety espaniola maro ilay mpanazatra ny ekipan’ny Real de Madrid taorian’ny faharesen’ny ekipa tantanany 3-0 nanoloana ny Barcelone,
Katsepy - Sambo rendrika Nieren-doza izy 13 nentin’ny “Fanantenana”
Ny sambo “Fanantenana” ity dobo an-dranomasina tany Katsepy ity raha tokony hihazo an'i Tambohorano,
Bejofo-Ambatondrazaka Rangahy avy namonjy sasak’alina, maty voafira antsy
Hivavaka, hitsena ny Mpamonjy no nivoahana ny trano, fahafatesana no nitsena. Nidiram-pahoriana tampoka ny fianakaviana iray ao Bejofo, Distrikan’Ambatondrazaka ny alin’ny 24 desambra teo. Namonjy Fiangonana nankalaza ny fahaterahan’ny mpamonjy izy mianakavy kely.